Dagmo Cusub Oo Kusoo Korortay Dagmooyinka Muqdisho
Loading...	Home Wararka Dagmo Cusub Oo Kusoo Korortay Dagmooyinka Muqdisho
Dagmo Cusub Oo Kusoo Korortay Dagmooyinka Muqdisho	Monday, 15 October 2012 13:16	Degaanka Kaxda ee Duleedka degmada Dharkeenley ayaa waxaa si rasmi ah maanta loogu aqoonsaday in aytahay ama ay noqoto degmadii 17aad ee ka tirsan Gobolka Banaadir kadib markii munaasaban ka dhacday Dagmadaan Cusub oo ayna kaqeeb galeen masuuliyiin badan oo katirsan Dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Waxaana ay aheed munaasabadaan mid siheersare loo soo agaasimay taas oo kadhacday Dagmada cusub ee Kaxda waxaana ay kamid noqotay degmooyinka Gobolka Banaadir oo horay u ahaa 16-dagmo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Wareegto dhowr bilood ka hor soo baxday oo uu kusaxiixan yahay Shariif Shiikh Axmed oo ay Wasaarada Arrimaha Gudaha waqtigeeda idlaaday ay soojeedisay ayaa waxaa degaanka Kaxda loogu magacaabay Dagmo rasmi ah waxaana qalinka ku duugay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho.
Masuuliyiinta ayaa waxaa kamid ahaa ee kaqeebgalay munaasabadaan Xoghayaha Gobolka Banaadir, Gudoomiye kuxigeenka dhanka amaanka iyo Afhayeenka waxaana halkaasi kusugnaa Masuuliyiin kala duwan iyo qaar kamid ah dadka degaanka.Waxaana gudoomiya dagmda kaxda loomagacaabay Cabdu Wali oo horay u ahaa Gudoomiya degaanka Kaxda iyadoona ay maanta sirasmi ah umagacaabay Dowlada Soomaaliya.
Dadka degaanka ayaa arintaan soo dhaweeyay oo arin wanaagsanna ku tilmaamay.
Tuesday, 16 October 2012 17:09	Bakaay	Waxan aad ugu faraxsanahay in laga dhigo degaankeena degmo ka tirsan degmooyin ka gobalka banaadir waa horumar u soo hoyday dadka dagan degmaadaasi iyo kuwa ku abtirsada waxan idin dhihi lahaa hambalyoooooooooooooooooooooooooooooooo xajista degaankiina